Gịnị bụ a kaadị flash mbanye, what`s ọ na-eji maka?
Mgbe USB pen draịva makwaara dị ka USB isi mkpịsị aka draịva e apụ ulo oru mgbe ahụ onye ọrụ nwere oke na nke a na ha bụ n'ezie agaghị enwe ike inweta ihe kasị mma mgbe ọ na-abịa na-ahọrọ, ịke na ọdịdị ruo mgbe na-adịbeghị anya na ISB draịva na-mepụtara bụ ndị na-na-abụghị nanị ọkaibe ma-ekwe ka ndị ọrụ na-inweta ihe kasị mma imewe nke mere na ha imenyụ akụ ụta ha akpịrị ịkpọ nkụ mgbe ọ na-abịa ịke. A nkuzi ga-na nke kacha mma ọdịdị nke USB mbanye na e mepụtara otú anya na ọ na-mara dị ka kaadị flash mbanye na nwere kaadị dị ka ọdịdị na ọ na-ekwe onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ mgbe ọ na-abịa USB draịva na-mepụtara.
Ndị a USB draịva na-mepụtara ma nye iwu site ego oru na ọ na-nyere ha ahịa dị ka a iriba ama nke amara ma ọ bụ mgbe ha na-eme kpọmkwem ịzụrụ site na ndị a ọchịchị ma ọ bụ ha na-emeghe ha akaụntụ na ha. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ndị a draịva nwekwara ndị na-ulo oru nile nke internet na iji nnukwu aha dị ka Amazon na eBay na onye ọrụ nwere ike ịhụ na-azụ ha mfe. Ọ na-na--ahụ kwuru na ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ na-enwe mgbe ndị a draịva na-zụrụ. Ọ bụ otu ugboro ọzọ ka kwuru na n'akụkụ ọdịdị e nweghị pụrụ iche arụmọrụ agbakwunyere n'ime ndị a draịva na ndị ọrụ nwere ike iji ha na ala na afọ ojuju dị ka nkịtị USB mbanye. Iji mee ihe nke ọma echiche ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ juputara na-amụ ọrụ, atụmatụ na imewe tupu ịzụta dị otú ahụ mbanye na ọ na--atụle n'isiokwu na zuru ezu na-esote nke a nkuzi.
Olee otú ịhọrọ ezi kaadị flash mbanye?
Ọ bụ-ahụ kwuru na kaadị flash mbanye bụ nnọọ na-ahọpụta ka dị nnọọ ka a nkịtị USB bụ na e nwere ndị mba pụrụ iche precautionary jikoro ịhọrọ kaadị flash draịva akpan akpan. -Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na a ga-aghọta na nke a na-eme ka n'aka na nhọrọ kasị mma e mere na onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma n'ozuzu:
Imewe na mkpokọta Ọdịdị nke ahụ USB flash mbanye kwesịrị dị otú ahụ na ọ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu nlereanya a họọrọ. The online echekwa dị ka Amazon na eBay jide n'aka na ọkaibe ụdị agbakwunyere na anwụ ngwa ngwa na-abụghị nanị ọnọde ọrụ ma na metụtara ego oru ma ọ bụ ha na ngwaahịa na-akwalite. Ịhọrọ a ọma imewe bụ ya mere ihe na-mkpa na maka otu ihe ahụ ọ bụ a n'ókè nke na a ga-atụle ji anya.
2. anwụ ngwa ngwa
Ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ na a onye ọrụ kwesịrị anya n'ihi na mgbe a mbanye a họọrọ. Ọ ga-eme ka ndị kasị mma na-adịte aka kaadị flash mbanye na-abụghị nanị họrọ ma e nwekwara a gbaa ibé na ruru ka pụrụ ịdabere na data n'ime ga-anọgide enem. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na data transfer nakwa dị ka eruba anọgide nọ n'ọnọdụ kasị mma. Ezi anwụ ngwa ngwa pụtara na e nwere ndị na-erughị Ohere nke ire ure na data n'ime bụ n'ime ndị kasị mma nchekwa nke mgbe niile na-enye onye ọrụ udo nke uche na nke a.
3. Space na tech nkọwa
Ndị kasị mkpa-ekwu bụ na nke usability nke kpuchiri doro ihe dị ka mma. Ọ pụtara na kasị mma na ndị ọkaibe ngwaahịa a họọrọ iji jide n'aka na onye ọrụ na-anọgide na kasị mma ọnọdụ ma ọ bụrụ na mbanye bụ ka e jiri ya ọ bụla nzube ọzọ karịa nchekwa. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na nke kasị dị mkpa isi na kwesịrị maa-atụle nke a iji jide n'aka na onye ọrụ na-eme ka ndị kasị mma ojiji nke echiche na kwa manipulates ọdịdị nke mbanye maka data nchebe na a ga-eme na ndabere nke a.
Olee otú iji kaadị flash mbanye
Ndị na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a na ọ ga na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe pụta na nke a:
1. The USB pin nke kaadị mbanye bụ ahụ na-emeghe nke mere na ort-aghọ anya dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ijide n'aka na USB mkpisi a na-ahụ etinyere n'ime USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke na kọmputa na My Computer nchekwa bụ na-emeghe iji jide n'aka na nchọpụta bụ anya:
3. The onye ọrụ nwere ike wee mepee mbanye na ike ịnyefe na data ma si na mbanye dị ka ọ na-eme na nkịtị USB mbanye na ọ na-okokụre usoro na zuru:
Nsogbu na-eji a kaadị flash mbanye
Ka nkịtị USB mbanye a onye ọrụ nwere ike na-eche ihu kpọmkwem otu mbipụta na nke a mgbe ọ na-abịa na kaadị flash draịva anọ kasị mkpa ndị nke e kwuru ka n'okpuru iji jide n'aka na onye ọrụ na-aghọ maara nke ọma ihe ndị bụ eziokwu metụtara nke a ụgbọala:
1. mberede nhichapụ nke data
2. Data nhichapụ ruru ka na-ekwesịghị ekwesị ojiji
3. Data ọnwụ ruru ka ike fluctuations
4. Drive formatted site accidently.
Iji jide n'aka na ihe kasị mma na nke Steti nke nkà data mgbake na ihu na nke a ọ na-gwara iji Wondershare Data Recovery ngwá ọrụ na usoro nke iji nke a kọwara dị ka n'okpuru. Ọ na-na--ahụ kwuru na ngwá ọrụ na-ahuta ka otu nke kasị mma dị ka ọrụ nwere gosiri ya elu:
1. The URL ie http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ ka a bịa na iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye usoro ihe omume ebudatara ma wụnye:
2. Na-aga n'Ihu onye ọrụ kwesịrị ka họrọ ụdị nke faịlụ:
3. Iji warara ala search kaadị USB mbanye bụ na-ahọrọ dị ka lekwasịrị ọnọdụ:
4. The onye ọrụ nwere ike mgbe ahụ họrọ chọrọ faịlụ ndị a ga-natara na pịa naghachi button na-akwụsị ndị usoro ọma:
> Resource> Flash Drive> All na ị chọrọ ịmata banyere kaadị flash mbanye